Ziziphi iinkonzo zikamasipala ezichaphazelekayo eMzantsi Afrika?
UmGaqo-siseko uchaza iinkonzo ngamnye kummandla wurhulumente kufuneka anikezele kwiShedyuli 5 no-6. Icandelo B lale shedyuli libeka imisebenzi yorhulumente wengingqi kubandakanya, umzekelo, umbane, amanzi kunye nocociso lweenkonzo kunye neendlela. Eminye imisebenzi “yabelwe” echaza ukuba iindidi ezahlukeneyo zorhulumente kufuneka zisebenzisane ukuze zihlangane.
Oomasipala kufuneka bavelise umvuzo wabo kwaye bonke benza njalo kwimithombo efanayo:
1. Izibonelelo (eziqokelelwa kwiirhafu zesizwe) njenge-Grant Equitable Grant kunye ne-Infrastructure Infrastructure Grant ukuhlawula inkokhelo yeendleko zokwakha iziseko zenzelwe ukuzuza amahlwempu.
2. Imali mboleko yimali umasipala obolekwe ebhankini kwaye kufuneka abuyisele ngenzala.
3. Intlawulo kunye nentlawulo yomsebenzisi. Amakhaya athola ngaphantsi kwexabiso elichaziweyo akumele ahlawule inani elithile leenkonzo.
Umasipala kufuneka ahlawule ngalinye inyathelo elifunekayo ukwenzela ukuhanjiswa kweenkonzo, oko kukuthi ucwangciso, ukwakhiwa, ukuqhuba nokugcina. Oomasipala balahlekelwa yimali xa abasebenzisi bengayikhokheli inkonzo zabo kwaye baya kuba nzima ukuqhubeka bezinikezela. Ukungabikho kwentlawulo kwiinkonzo ngabahlali kwinqanaba likamasipala kunokubangela ukunyuka.
Funda malunga nendlela iSebe le-Co-operative Governance neMicimbi yezeMveli ekhokelela ngayo abahlawuli bemilinganiselo yokuhlawula kule vidiyo